The 7th CNF Party Conference Statement ခငျြးအမြိုးသားတပျဦး၏ သတ်တမအကွိမျ ညီလာခံ ထုတျပွနျကွညောခကျြ – THE CHINLAND POST
The 7th CNF Party Conference Statement ခငျြးအမြိုးသားတပျဦး၏ သတ်တမအကွိမျ ညီလာခံ ထုတျပွနျကွညောခကျြ
7th CNF Party Conference/The Chinland Post
unicode ခငျြးအမြိုးသားတပျဦး၏ သတ်တမအကွိမျ ညီလာခံ ထုတျပွနျကွညောခကျြ
၁။ ခငျြးအမြိုးသားတပျဦး၏ သတ်တမအကွိမျ ညီလာခံကို ၂၀၂၀ ခုနှဈ၊ မတျလ (၁၆) ရကျမှ (၁၉) ရကျအထိ ဝိတိုရိယ ဗဟိုဌာနခြုပျတှငျ ကငျြးပပွုလုပျခဲ့ရာ ပွညျတှငျး၊ ပွညျပမှ ခငျြးအမြိုးသားတပျဦး/တပျမတျော ကိုယျစားလှယျနှငျ့ လလေ့ာသူ စုစုပေါငျး (၁၅၁) ဦး ပါဝငျတကျရောကျခဲ့ကွသညျ။
၂။ ညီလာခံတှငျ ဆဋ်ဌမအကွိမျ ညီလာခံသကျတမျးမှ လုပျငနျးအစီရငျခံစာမြားအပျေါ တငျပွအတညျပွုခွငျး၊ အစိုးရ၊ နိုငျငံရေးပါတီမြား၊ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျတျောလှနျရေးအဖှဲ့အစညျးမြား၊ ငွိမျးခမျြးရေးဖွဈစဉျနှငျ့ နိုငျငံတကာ နိုငျငံရေးအခငျးအကငျြးတို့အပျေါ သုံးသပျခွငျးနှငျ့ မှတျတမျးတငျခွငျးမြား ပွုလုပျခဲ့ကွသညျ။
၃။ သတ်တမအကွိမျ ညီလာခံက တပျဦး၏ နိုငျငံရေး ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျအဖွဈ –
(က) ခငျြးအမြိုးသားတို့၏ ကိုယျပိုငျပွဋ်ဌာနျးခှငျ့ (Self-determination) ပွနျလညျရရှိရေး၊
(ခ) ဒီမိုကရစေီရေး၊ အမြိုးသားတနျးတူရေးနှငျ့ ကိုယျပိုငျပွဌာနျးခှငျ့ အခှငျ့အရေးမြား အပွညျ့အဝရှိပွီး နိုငျငံရေး တနျးတူမှုရှိသော အမြိုးသားပွညျနယျမြားနှငျ့ ပထဝီအခွခေံပွညျနယျမြားဖွငျ့ စုဖှဲ့ထားသညျ့ ဖကျဒရယျပွညျ ထောငျစု ထူထောငျရေး၊
(ဂ) ဒီမိုကရစေီစနဈတညျဆောကျရေး ဟူ၍ ခမြှတျသညျ။
၄။ ခငျြးအမြိုးသားတပျဦး၏ ငွိမျးခမျြးရေးဆိုငျရာ လုပျငနျးစဉျအဖွဈ-
ပွညျထောငျစု ငွိမျးခမျြးရေးညီလာခံ – ၂၁ ရာစု ပငျလုံအစညျးအဝေးမြား၏ အစုအဖှဲ့အသီးသီးတှငျ ပါဝငျကွသော ခငျြးအမြိုးသားမြားအနဖွေငျ့ အမြိုးသားအဆငျ့ နိုငျငံရေးဆှေးနှေးပှဲမြားမှတဆငျ့ ၂၁ ရာစု ပငျလုံအစညျးအဝေး မြားသို့ တငျသှငျးမညျ့အဆိုပွုလှာမြားနှငျ့ပတျသကျပွီး ခငျြးအမြိုးသားမြား၏နိုငျငံရေး ဘုံသဘောထားရရှိနိုငျရေး အတှကျ ကွိုးပမျးဆောငျရှကျသှားရနျ၊ ငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးစဉျနှငျ့ပတျသကျပွီး ပွညျသူလူထုထံသို့ အခြိနျနှငျ့ တပွေးညီ တငျပွနိုငျရေးနှငျ့ အဆိုပွုခကျြမြား ရယူနိုငျရေးအတှကျ ကွိုးပမျးဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈသညျ။
၅။ မွနျမာ့တပျမတျောနှငျ့ Arakan Army (AA) အကွား ဖွဈပှားနသေော စဈရေးပဋိပက်ခသညျ ခငျြးအမြိုးသားမြား အပျေါ စဈရာဇဝတျမှု ကြူးလှနျမှုမြား ရှိနခွေငျးကွောငျ့ ခငျြးအမြိုးသားမြားအတှကျ အရေးပျေါအခွအေနေ ရောကျနပွေီဟု မှတျယူသညျ။ ထို့ကွောငျ့ မွနျမာ့တပျမတျောနှငျ့ AA အနဖွေငျ့ ခငျြးအမြိုးသားပိုငျနကျနယျမွေ အတှငျး တိုကျပှဲမြား ခကျြခငျြးရပျတနျ့ရနျနှငျ့ AA အနဖွေငျ့ ခငျြးပွညျနယျနှငျ့ ခငျြးလူမြိုးမြား နထေိုငျရာဒသေမြား တှငျ စဈရေးအရ အခွခေလြှုပျရှားနထေိုငျခွငျး လုံးဝမပွုရနျ အလေးအနကျ တောငျးဆိုသညျ။
၆။ ခငျြးပွညျနယျ၊ ပလကျဝမွို့နယျနှငျ့ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးရှိ ခငျြးလူမြိုးမြား နထေိုငျရာဒသေမြားတှငျ တိုကျပှဲမြား ကွောငျ့ လူမှုဒုက်ခအတိ ခံစားနကွေရသော ဒသေခံခငျြးပွညျသူမြားအတှကျ လိုအပျသော လူမှုကူညီထောကျပံ့ မှုမြားပေးရေးနှငျ့ ပွနျလညျနရောခထြားနိုငျရေးကို ပွညျတှငျးပွညျပရှိ ခငျြးအမြိုးသားမြား၊ ခငျြးပွညျနယျအစိုးရ၊ အစိုးရမဟုတျသော အဖှဲ့အစညျးမြား၊ လူမှုအဖှဲ့အစညျးမြား၊ ဘာသာရေးအသငျးအဖှဲ့မြားအနဖွေငျ့ အမြိုးသားရေး တာဝနျတဈရပျအနဖွေငျ့ ဆကျလကျတာဝနျယူဆောငျရှကျပေးကွရနျနှငျ့ ဖျောပွပါလုပျငနျးစဉျမြားကို ခငျြးအမြိုး သားတပျဦးမှ နညျးလမျး ပေါငျးစုံအသုံးပွုပွီး ကမကထပွု အကောငျအထညျဖျောဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈသညျ။
၇။ ခငျြးအမြိုးသားတပျဦး၏ သတ်တမအကွိမျညီလာခံသကျတမျးအတှငျး တပျဦးကို ဦးဆောငျမညျ့ ဥက်ကဋ်ဌ၊ ဒုတိယဥက်ကဋ်ဌ မြား၊ အထှထှေအေတှငျးရေးမှူးနှငျ့ လကျထောကျအထှထှေအေတှငျးရေးမှူးမြားကို အောကျပါအတိုငျး ရှေးခယျြ ဖှဲ့စညျးသညျ။
(၁) Pu Zing Cung – ဥက်ကဋ်ဌ
(၂) Pu Thang Ning Kee – ဒုတိယဥက်ကဋ်ဌ ၁
(၃) Dr. Lian Hmung Sakhong – ဒုတိယဥက်ကဋ်ဌ ၂
(၄) Dr. Sui Khar – ဒုတိယဥက်ကဋ်ဌ ၃
(၅) Salai Thla Hei – အထှထှေအေတှငျးရေးမှူး
(၆) Salai Ram Kulh Cung – လကျထောကျအထှထှေအေတှငျးရေးမှူး ၁
(၇) Salai Htet Ni – လကျထောကျအထှထှေအေတှငျးရေးမှူး ၂
(၈) Pu HC. Ral Hnin – လကျထောကျအထှထှေအေတှငျးရေးမှူး ၃
၂၀၂၀ ခုနှဈ၊ မတျလ (၁၉) ရကျ
Salai Thla Hei
ဖုနျး +၉၅ ၉၇၉ ၅၇၅ ၄၄၃၅
+၉၅ ၉၄၅ ၂၀၅ ၄၄၈၈
ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး၏ သတ္တမအကြိမ် ညီလာခံ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
၁။ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး၏ သတ္တမအကြိမ် ညီလာခံကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၆) ရက်မှ (၁၉) ရက်အထိ ဝိတိုရိယ ဗဟိုဌာနချုပ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး/တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်နှင့် လေ့လာသူ စုစုပေါင်း (၁၅၁) ဦး ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
၂။ ညီလာခံတွင် ဆဋ္ဌမအကြိမ် ညီလာခံသက်တမ်းမှ လုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာများအပေါ် တင်ပြအတည်ပြုခြင်း၊ အစိုးရ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နှင့် နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းတို့အပေါ် သုံးသပ်ခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
၃။ သတ္တမအကြိမ် ညီလာခံက တပ်ဦး၏ နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အဖြစ် –
(က) ချင်းအမျိုးသားတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် (Self-determination) ပြန်လည်ရရှိရေး၊
(ခ) ဒီမိုကရေစီရေး၊ အမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် အခွင့်အရေးများ အပြည့်အဝရှိပြီး နိုင်ငံရေး တန်းတူမှုရှိသော အမျိုးသားပြည်နယ်များနှင့် ပထဝီအခြေခံပြည်နယ်များဖြင့် စုဖွဲ့ထားသည့် ဖက်ဒရယ်ပြည် ထောင်စု ထူထောင်ရေး၊
(ဂ) ဒီမိုကရေစီစနစ်တည်ဆောက်ရေး ဟူ၍ ချမှတ်သည်။
၄။ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်-
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ – ၂၁ ရာစု ပင်လုံအစည်းအဝေးများ၏ အစုအဖွဲ့အသီးသီးတွင် ပါဝင်ကြသော ချင်းအမျိုးသားများအနေဖြင့် အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများမှတဆင့် ၂၁ ရာစု ပင်လုံအစည်းအဝေး များသို့ တင်သွင်းမည့်အဆိုပြုလွှာများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ချင်းအမျိုးသားများ၏နိုင်ငံရေး ဘုံသဘောထားရရှိနိုင်ရေး အတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားရန်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူလူထုထံသို့ အချိန်နှင့် တပြေးညီ တင်ပြနိုင်ရေးနှင့် အဆိုပြုချက်များ ရယူနိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
၅။ မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် Arakan Army (AA) အကြား ဖြစ်ပွားနေသော စစ်ရေးပဋိပက္ခသည် ချင်းအမျိုးသားများ အပေါ် စစ်ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်မှုများ ရှိနေခြင်းကြောင့် ချင်းအမျိုးသားများအတွက် အရေးပေါ်အခြေအနေ ရောက်နေပြီဟု မှတ်ယူသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် AA အနေဖြင့် ချင်းအမျိုးသားပိုင်နက်နယ်မြေ အတွင်း တိုက်ပွဲများ ချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်နှင့် AA အနေဖြင့် ချင်းပြည်နယ်နှင့် ချင်းလူမျိုးများ နေထိုင်ရာဒေသများ တွင် စစ်ရေးအရ အခြေချလှုပ်ရှားနေထိုင်ခြင်း လုံးဝမပြုရန် အလေးအနက် တောင်းဆိုသည်။
၆။ ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ချင်းလူမျိုးများ နေထိုင်ရာဒေသများတွင် တိုက်ပွဲများ ကြောင့် လူမှုဒုက္ခအတိ ခံစားနေကြရသော ဒေသခံချင်းပြည်သူများအတွက် လိုအပ်သော လူမှုကူညီထောက်ပံ့ မှုများပေးရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားနိုင်ရေးကို ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ ချင်းအမျိုးသားများ၊ ချင်းပြည်နယ်အစိုးရ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့များအနေဖြင့် အမျိုးသားရေး တာဝန်တစ်ရပ်အနေဖြင့် ဆက်လက်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးကြရန်နှင့် ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းစဉ်များကို ချင်းအမျိုး သားတပ်ဦးမှ နည်းလမ်း ပေါင်းစုံအသုံးပြုပြီး ကမကထပြု အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
၇။ ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး၏ သတ္တမအကြိမ်ညီလာခံသက်တမ်းအတွင်း တပ်ဦးကို ဦးဆောင်မည့် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ များ၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနှင့် လက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးများကို အောက်ပါအတိုင်း ရွေးချယ် ဖွဲ့စည်းသည်။
(၁) Pu Zing Cung – ဥက္ကဋ္ဌ
(၂) Pu Thang Ning Kee – ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ၁
(၃) Dr. Lian Hmung Sakhong – ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ၂
(၄) Dr. Sui Khar – ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ၃
(၅) Salai Thla Hei – အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး
(၆) Salai Ram Kulh Cung – လက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ၁
(၇) Salai Htet Ni – လက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ၂
(၈) Pu HC. Ral Hnin – လက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ၃
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၉) ရက်
ဖုန်း +၉၅ ၉၇၉ ၅၇၅ ၄၄၃၅
Previous Covid-19 le Chin Ralzam: “Chanchuah manh lo minung kan um kho men”
Next မခုနျခငျကွိုကွညျ့၊ မပွောခငျ အရငျခငျြ့ခြိနျပါ (Look before you leap, think before you speak)